Mid ka mid ah xildhibaanada cusub ee dhawaan loo doortay Aqalka hoose oo geeriyooday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Mid ka mid ah xildhibaanada cusub ee dhawaan loo doortay Aqalka hoose oo geeriyooday
Waxaa habeenkii xalay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ku geeriyooday Allaha u naxariistee xildhibaan Daahir Xaaji Geelle oo ka tirsanaa xubnaha Aqalka hoose ee dhawaan la doortay, islamarkaana hore uga tirsanaa xildhibaanada hore ee baarlamaanka Soomaaliya.
Allaha u naxariisteee geerida xildhibaan Daahir Xaai Geelle ayaa la sheegay inay aheed mid kadis ah, waxaana la sheegay kahor inta uusan geeriyoon inuu si caadi ah ula caweeynayay asxaabtiisa oo ku sugneed Hoteel ku yaala magaalada Garoowe.
Waxaa la sheegayaa in xildhibaanka qolkii uu ka degnaa hoteelka uu kasoo baxay isaga oo wadnaha ka sheeganaya, waxaana la sheegay in xilligaas kadb nafta ka baxday uuna ku geeriyooday hoteelkii uu deganaa.
Ilaa iyo hataan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeeysay geerida xildhbaankaan ka tirsanaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, balse aan la dhaarin, waxaana geeridan ka naxay asxaab badan oo isaga si aad ah u taqaanay.
Allaha u naxariistee xildhibaan Daahir Xaaji Geelle ayaa baarlamaanka Soomaaliya kusoo biiray sanadkii 2009-kii, waxa uuna mar kale nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo xildhibaanada Aqalka hoose oo weli doorashadeeda ka socoto qeybo ka mid ah gobolada dalka, waxaana lagu wadaa in maanta lagu aaso magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.